२०७८ असोज १४ बिहीबार ०६:४६:००
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण मास्के भन्छन्– हृदयाघात वा मुटुरोगसम्बन्धी समस्याहरू जोसुकैलाई हुन सक्छ । लक्षण देखिएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ ।
मुटुरोगको जोखिम केही दशकयता बढ्दै गइरहेको छ । अव्यवस्थित जीवनशैली, अस्वस्थ खानपान, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रोल र धुमपानका कारण युवाहरूमा समेत हृदयाघातको जोखिम बढिरहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
विभिन्न अध्ययनहरूले मुटुमा समस्या देखिए अत्यधिक तनाव र मुटुको धड्कनमा परिवर्तन महसुस हुन्छ । अत्यधिक चिन्ता लिने व्यक्तिमा शारीरिक र मानसिक बराबर असर पर्ने हुँदा मुटुको चालमा आउने परिवर्तनलाई समेत यसकै संकेतका रूप मानिन्छ । धड्कनमा गडबडी देखिए मुटुमा समस्या भएको हुन सक्छ ।
अधिकांश हृदयाघातका घटनामा सुरुमा छातीमा दुखाई हुने गरेको छ । जुन बिस्तारै पाखुरा, घाँटी र शरीरको अन्य भागमा फैलिँदै जान्छ । यस्तो दुखाई केही समयसम्म मात्रै रहन्छ । तर, बायाँ हात दुखाई हृदयाघातको सबैभन्दा सामान्य लक्षणमध्ये एक हो । अमेरिकन हर्ट एसोसिएसनका अनुसार अचानक देब्रे हातमा हुने दुखाई हृदयाघातको संकेत हो यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
अपच, पेट दुख्ने, बान्ता हुने र भोक नलाग्ने समस्या पनि मुटुसम्बन्धी रोगका लक्षण हुन सक्छन् । यस्ता लक्षणहरू ग्यासट्राइटिसमा देखिने भए पनि चिकित्सकसँग परामर्श र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रको एक रिपोर्टअनुसार, मुटुरोगपीडित व्यक्तिहरूमा कमजोरीपन, हल्का टाउको दुख्ने वा बेहोस हुनेजस्ता समस्या हुन सक्छ । मुटुले रगत राम्रोसँग पम्प नगर्दा, मस्तिष्कमा हुन जाने कम रक्तसञ्चारका कारण रिंगटा लाग्ने वा बेहोस हुने हुन्छ ।
रक्तसञ्चारमा कमी आउँदा प्रत्येक कोषिकाहरूमा असर देखिन थाल्छ । जुन छालामा प्रस्ट देखिने गर्छ । छाला पहेँलो हुनुलाई गम्भीर लक्षणका रूपमा लिने गरिन्छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. अरुण मास्के भन्छन्, ‘हृदयाघात वा मुटुरोगसम्बन्धी समस्याहरू जोसुकैलाई हुन सक्छ । केही दशकयता कम उमेरमै मुटुरोगको जोखिम बढेको अध्ययनले समेत देखाएका छन् । तसर्थ यस्ता लक्षण देखिएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ ।’